Hoodie On-Demand Aagagga Daabacaadda
Hoodie waxay leedahay meelo daabacan oo suurtogal ah oo kala duwan waxayna dejin kartaa habab daabacaad oo kala duwan, laakiin waxay la timaadaa xannibaadyo iyo arrimo suurtagal ah. Sida waxyaabo kale oo badan, xeerka suulka ayaa fududaynaya. Wanaagsan, ka dhig mid heer sare ah. Marka hore aan eegno meelaha daabacaadda, ka dibna gal ...
Ragga iyo unisex vs koofiyadaha dumarka
Mid ka mid ah go'aannada ugu waaweyn ee la gaaro marka la iibsanayo jumlad waa in la iibsado unisex oo dhan ama in la dalbado qaababka ragga iyo dumarka. Sababtoo ah dhammaan badeecooyinka hoodie kuma yimaadaan ragga iyo dumarka labadaba. Haddii aysan samayn, waxaa loo yaqaan unisex. Unisex asal ahaan waa isku mid sida ragga. Si kale haddii loo dhigo, waxay sameeyeen ...
Sida loo dalbado koofiyadaha cabbirka saxda ah?
Guud ahaan marka la hadlayo, cabbirada koofiyaddu waxay la jaanqaadi doontaa waxa aad caadiyan ku xidhan lahayd tirada funaanadda. Laakiin sida caadiga ah, waxaa jira waxyaabo ka reeban; inta badan waa in lagu sameeyo noocyada qaarkood, qaababka, ku habboonaanta, iyo farqiga u dhexeeya goynta ragga iyo dumarka. Markaa waxaad dooneysaa inaad tixgeliso haddii qaabka shaqsiyeed uu soo geli doono. Wixii e ...
Sida loo xirto koofiyad
Su'aasha ugu sahlan ayaa noqon doonta sida aan loo xirnayn koofiyad. Waa mid ka mid ah dharka ugu badan ee armaajada qof kasta. Markii hore loo weeciyay jimicsiyada, ciyaaraha kubbadda cagta, iyo fiidyaha misigta misigta, hoodie -ku wuxuu u noqday shay udub dhexaad u ah dhammaan noocyada dadka, sababtuna waa kala duwanaansho maalmeedkiisa - iyo sii kordheysa, ...
3 Koofiyado naxariis leh oo aadan xiran doonin
Ugu horreyn, ha xiran koofiyadaha waqtiyada gaarka ah. Hoodies waxaa loogu talagalay raaxada, xaaladaha aan caadiga ahayn iyo laga yaabee inay marmar soo baxdo. Ka fogow wareysiyada shaqada, taariikhaha ugu horreeya, imaanshaha maxkamadda, waalidiinta la kulma, Mahadnaqa, xafladaha shaqada fasaxa, aaska, iyo hubaal ha gashan koofiyadaha f ...
Waa maxay faa'iidooyinka kabaha dhididka leh?
Dharku waa maaddada loo isticmaalo dharka. Sida mid ka mid ah saddexda walxood ee dharka, marooyinku ma tarjumi karaan oo kaliya qaabka iyo astaamaha dharka, laakiin sidoo kale waxay si toos ah u saameeyaan midabka iyo qaabka dharka. Haddaba Waa maxay faa'iidooyinka dhididka dunta ah ee la tolay? 1. Cabbiraadda Farshaxanka ...
Farqiga u dhexeeya maaliyada iyo suufka
Suufku waa nooc ka mid ah fiber (fiber cellulose dabiici ah) maaliyaduna waa farsamo tolidda. Jersey waxaa loo sii qaybiyay 2; maaliyad keliya iyo funaanad labalaab ah Labaduba waa farsamooyinka tolidda. Guud ahaan dharka la tolay ayaa marar badan la xidhaa. Tusaale ahaan funaanadda aad xiran tahay waa la tolay, inta badan waa sariirta ...
Waa maxay hoodie tie dye? Tie Dye Taariikhda
Xadhig-midabaynta, habka rinji-gacmeedka ee qaababka midabada leh lagu soo saaro marada iyada oo la soo ururiyo qaybo badan oo alaab ah oo si adag loogu xidho xadhig ka hor inta aan dharka lagu darin dhagaxa. Dheehgu wuxuu ku guuldareystaa inuu dhex galo qaybaha xidhan. Ka dib qalajinta, marada waa ...
Sida Loo Iibsado Hoodie & Dhididka
Waxa ugu horreeya ee la tixgeliyo waa dharka Hoodie & Sweatshirts. Guud ahaan suuf-ku-salaysan, ama wax yar oo la isku daray, waa maro dhuuban oo tollan (saddex-xarig cuf), xagga hore waa qaab-tollan, gudahana waa loop, haddii la seexdo, waxaa la yiraahdaa flannel. Sababtoo ah waxay aad ugu dhowdahay xirashada, waa comf ...